RIKOODH: Real Madrid Oo Rikoodh Cusub Ka Dhigtay Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Xagaagan - Gool24.Net
RIKOODH: Real Madrid Oo Rikoodh Cusub Ka Dhigtay Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Xagaagan
Real Madrid ayaa suuqa xagaagani u xidhmay iyadoon hal ciyaartoy lasoo wareegin, waxaana kaliya furnaa albaabka bixitaanka oo dersin laacibiinteeda ka mid ah qaarna ay iibisay, kuwo kalena amaah ay ku baxeen.
Los Blancos ayaa loo diiwaangeliyey rikoodh cajiib ah oo aan 40kii sannadood ee ugu dambeeyey soo marin kooxdan, waxaanay u noqotay xagaagii ugu horreeyey ee aanay wax ciyaartooyo ah lasoo wareegin muddadaas afartanka sannadood ah.
Tababare Zinedine Zidane ayaa waxa kaliya oo uu koodiisa kusoo celiyey saddex ciyaartoy oo amaah kaga maqnaa oo kala ah Martin Odegaard oo khadka dhexe ah, goolhaye Andriy Lunin iyo difaaca midig ee Alvaro Odriozola, kuwaas oo waqtiyo kusoo kala qaatay kooxaha Real Sociedad, Real Oviedo iyo Bayern Munich oo ay xili ciyaareedkii ugu dambeeyey u kala ciyaarayeen.
Laacibka reer Norway ee Martin Odegaard oo dhawrkii xili ciyaareed ee ugu dambeeyey amaah ugu maqnaa kooxo kala duwan, ayaa waxa uu kusoo laabtay kooxdiisa isaga oo soo helay khibrad, qaan-gaadhnimo ciyaareedna muujiyey maadaama ay da’diisu ahayd 16 jir markii uu yimid Santiago Bernabeu.
Suuqa iibka ciyaartoyda ee xagaagan, waxa uu Real Madrid u noqday markii ugu horreysay ee tan iyo 1980kii aanay wax ciyaartooyo ah lasoo saxeexanin.
Sannadkaas 1980kii, waxay Real Madrid dib ugu noqotay kooxdeeda heerka labaad oo ay kasoo dallacsiisatay saddex ciyaartoy oo da’ yar ahaa, laakiin may jirin ciyaartooyo bannaanka uga yimid.
Real Madrid waxay toddobaadyadii ugu dambeeyey ka dirtay kooxdeeda oo amaah ama iib ku baxay ciyaartooyo ay ka mid yihiin Gareth Bale, Sergio Reguiolon, James Rodriguez, Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Reinier Jesus, Dani Ceballos, Borja Mayoral iyo Tafekusa Kubo.
Madaxweyne Florentino Perez ayaa taageereyaasha kooxda usii sheegay bishii July in aanay samayn doonin saxeexyo cusub maadaama uu dhaqaalahooda dhibaato ku keenay Korona Fayraska oo hoos u dhac weyni ku yimid dakhligoodii.
Donny van De Beek oo ay Real Madrid heshiis isfaham ah lasiii gaadhay ayay ka talo-baxday oo u wareegay Manchester United, waxaanay doorbiday inay soo ceshato Odegaard oo khibradda kasii dhaxlaya Luka Modric.
Sababta kale ee Real Madrid ka joojisay inay ciyaartooyo soo iibsato ayaa waxay tahay garoonka Santiago Bernabeu oo dibu-dhis lagu samaynayo, illaa bishii March na xidhnaa, waxaana la filayaa inay ku baxdo lacag dhan €800 milyan oo Euro.